Nhau - Chii chandinofanira kuita mushure mekubaiwa zvakakwana nenjodzi ku COVID-19?
358 Anti kuba fenzi
Chii chandinofanira kuita mushure mekubaiwa zvakakwana nenjodzi ku COVID-19?
Kunyangwe vazhinji vedu takamirira neshungu zuva ratinogona kuronga musangano wekudzivirira mushonga weCOVID-19, zuva iri rinogona kutanga kupfuura zvaunofunga. Gavhuna Gavin Newsom (Gavin Newsom) vakati kutanga muna Kubvumbi 15, vese vekuCalifornian makore gumi nematanhatu zvichikwira vanogona kuita musangano wejekiseni reCOVID-19-kutanga musi waApril 1, 50 ne50 makore. Vanhu vanodarika zera rino vanozokwanisa kuita musangano nguva pfupi.
Munyika yose, Mutungamiriri Biden akazivisa kuti munhu wese mukuru muUnited States achabvumirwa kubaiwa nhomba musi wa1 Chivabvu usati wasvika, "Chinangwa ndechekuswededza United States padanho chairo kusvika Chikunguru 4."
Nezvose izvi mupfungwa, unogona kunge uchishamisika: chii chaunogona kuita mushure mekubayiwa zvakakwana? Uye, pamwe zvakanyanya kukosha, chii chausingafanire kuita?
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti hauzodzivirirwa kubva kune coronavirus nekukurumidza mushure mekudzivirira kwekutanga. Imhaka yekuti zvinotora nguva yako yemuviri kuvaka ma antibodies anodiwa, ayo anogona kukudzivirira kubva ku COVID-19.
Sekureva kweCentre for Disease Control and Prevention, unoonekwa sewe "wakachengetedzwa zvakakwana" uye "wakabaiwa zvakakwana" masvondo maviri mushure mekutora mushonga wePfizer BioNTech kana Moderna COVID-19 kechipiri, kana masvondo maviri mushure meimwe jekiseni Vaccine "Johnson & Johnson (Johnson & Johnson / Janssen) mushonga we COVID-19.
Saka hutachiona hwako hwaive sei zvisati zvaitika? YeModerna uye Pfizer-BioNTech majekiseni, iyo yekutanga dosi inokupa iwe yakawanda yekudzivirira kubva kuzvirwere zvakakomba, uye wechipiri muyero uchakutora iwe uko. Uye zvakare, nyanzvi dzinotenda kuti wechipiri muyero unogona kuwedzera nguva yemushonga.
Wachter akati mazuva gumi nemana mushure mekudzivirira kwekutanga kweModerna kana Pfizer-BioNTech, unodzivirirwa neavhareji ye80%. (Kana iwe uchida kufunga nezvekusvetuka muyero wechipiri, yeuka kuti muyedzo wekudzivirira majekiseni idosi mbiri, saka kunzwisisa kwedu kwechirwere chekudzivirira kunoenderana nematanho maviri.)
Iyo Johnson / Johnson imwechete dosi inopa 66% kudzivirirwa kwese mushure memasvondo maviri. Mushure memazuva makumi maviri nemasere, inogona kudzivirira zvakanyanya zvirwere zvakakomba kana zvakakomba zvine 85%. Verenga zvimwe nezve kukura kweutachiona mushure mekudzivirira.
Dr. Peter vakati: "Zvakakosha chaizvo kumirira vhiki mbiri mushure mekubaiwa jekiseni rekupedzisira, nekuti havazi vese vakafanana, uye kunyangwe vamwe vanhu vachiwana mabhenefiti ekutanga kuburikidza nekuumbwa kwemaantibiro anorwisa mapuroteni epikisi, hachisi chokwadi ichi hachisi chokwadi kuvanhu vazhinji. ” Chin-Hong, purofesa wemishonga uye chirwere chinotapukira nyanzvi paUCSF.
“Hatizive kuti ndiani achatora dziviriro murwi. Naizvozvo, hwindo remavhiki maviri rinopihwa kumunhu wese mushure mekubaiwa jekiseni rekupedzisira, izvo zvinotipa chivimbo chekuzvibata sevanhu vari mumiedzo yekiriniki, ”akadaro.
Ipfupi vhezheni: Ipa jekiseni nguva yainotora kudzivirira muviri wako kubva kuCOVID-19. Unofanirwa kunwa mushonga kwevhiki mbiri kuti utore mushonga zvachose.
Sekureva kweCDC, kunyangwe hazvo ongororo dzekutanga dzakaratidza kuti vakabaiwa zvakakwana vanhu vangangoita hutachiona husingaite, ichiri kuenderera. Ichi ndicho chikonzero tiri kutaura nezvevanhu vakabayiwa majekiseni avo dzimwe nguva vachiri kuda kutora matanho ekudzivirira.
Dr. Chin-Hong vakati: “Ikozvino kune humbowo hwakawanda hwekuti hazvigoneke kuti vanhu vakabaiwa majekiseni akazara kuti vapararire kuvanhu vasina kubayiwa. Nekudaro, mukana wakazara ishoma kwazvo, ”akadaro Dr. Chin-Hong. .
Naizvozvo, sekune zviitiko zvese mudenda, zvakanakira kuenderera nekungwarira kuchengetedza shamwari dzako, mhuri, nenzanga huru, uye uteedzere nhungamiro pazasi.
Iyo ipfupi vhezheni: Hatisati tava nechokwadi kana kubaya zvakakwana kubva kuCOVID-19 kuchakudzivirira kubva pakuparadzira hutachiona. Naizvozvo, mune dzimwe nguva iwe uchiri kuda kutora matanho.
CDC yakataura kuti njodzi yemunhu akabayiwa jekiseni zvizere neCOVID-19 "yakaderera" -asi izvo zvaunofanira kunge uchinyatsoziva ndezvipi zviratidzo zveCOVID-19.
Kana iwe ukafumurwa kune mumwe munhu anofungidzirwa kana akawanikwa aine COVID-19, asi iwe wakabaiwa jekiseni uye usina COVID-senge zviratidzo, haufanire kuti ugare uri wega uye haufanire kuongororwa chirwere checoronavirus. CDC inoti imhaka yekuti njodzi yekutapukirwa yakanyanya kuderera.
Nekudaro, kana iwe ukafumurwa uye ukaita zviratidzo, iyo CDC inoti iwe unofanirwa kuzviparadzanisa kubva kune vamwe uye kuitisa bvunzo. Kana izvi zvikaitika, zvakakosha kuti mupi wako wezvehutano azive kuti wakabaiwa zvakakwana.
CDC zvakare inopa yakadzama nhungamiro yevakazara vakabaiwa vanhu vanogara kana vanoshanda mukuunganidzira nzvimbo kana dzakakwirira nzvimbo nzvimbo dzekushandira.
Muchidimbu: njodzi yekuwana COVID-19 mushure mekubaiwa zvakakwana yakadzika, asi ziva zviratidzo.
Hongu unokwanisa! Masangano eU.S.Centre for Disease Control and Prevention (CDC) anoti vanhu vakabaiwa majekiseni vanogona kutandara mumba nevamwe vakabaiwa vasina masiki kana kuremara munharaunda.
Semuenzaniso, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yakati kana iwe wakabaiwa zvakakwana, "hazviite kuti ukoke dzimwe shamwari dzakabaiwa majekiseni kuzodya kumba kwako."
Zvisinei, CDC ichiri kukurudzira vanhu vakazara vakabaiwa kuti vaunganidze kuungana uku kune mumwe mugumo. Yakati izvi imhaka yekuti "kuungana kwepakati kana kukuru, uye kuungana kunosanganisira vanhu vasina kubayiwa nhomba kubva kumhuri dzakawanda" kuchawedzera njodzi yekuparadzira COVID-19.
Dr. Chin-Hong vakati: "Chiverengero chakakosha nekuti inongova nhamba yemhino nemiromo yevanhu vanobva mumapoka akasiyana ane njodzi." “Kana vanhu vauinavo vakawanda (vakabayiwa majekiseni kana vasina kubayiwa), ndipo panowedzera vanhu vasingateereri mushonga uye mukana wakakura ndiko kuwedzera mikana yevanhu vanobatira COVID. Naizvozvo uyu ndiwo mutambo wenhamba. ”
Kana iwe wakabaiwa jekiseni uye ukazviwana iwe uine kuungana kwakawanda, CDC inokurudzira kuti iwe urambe uchiita COVID-19 nzira dzekudzivirira, kusanganisira kugara uye kugara kure nenzanga.
Muchidimbu: iri njodzi yakaderera kuti munhu akabayiwa jekiseni atandare nemunhu akabayiwa, asi zvicharamba zvichiita kuti bato rako rive diki.
Sekureva kweCentre for Disease Control and Prevention (CDC), kana iwe (munhu akabayiwa zvakakwana) uchishanyira imba yemunhu asina kubayiwa nhomba, unofanirwa kushanyira ivo mumba uye vasina chifukidzo. Mune mamwe mazwi, chero bedzi vanhu vasina kubayiwa nhomba havasi panjodzi huru yekubata COVID-19.
Kunyangwe kana mumwe wevanhu vasina kubayiwa ari boka rine njodzi, iwe (munhu akabayiwa jekiseni) unogona kuramba uchivashanyira mumba, chero bedzi uchidzidzira COVID-19 matanho ekudzivirira, akadai sekupfeka masiki akaomarara uye kuchengeta anosvika matanhatu tsoka kure , sarudza nzvimbo inofefetera zvakanaka uye geza maoko ako. Kana iwe urikushanyirawo vasina kuvharirwa vanhu vanobva kumhuri dzakawanda, iri zano rinoshandawo.
Uye, sezvambotaurwa, kana iwe uine musangano wepakati kana muhombe nevanhu vazhinji (zvisinei kuti vakabaiwa jekiseni here kana kuti kwete), unofanirwa kuramba uchichengetedza COVID-19, sekubuda munharaunda uye mask.
Iko kune inobatsira infographic kumusoro kweCDC inonyora aya mamiriro. Wadii kuichengeta pafoni?
Chirevo chipfupi: Kana pasina munhu ari panjodzi huru, unogona kumbotandara nemhuri isina kubayiwa jekiseni, usapfeke chifukidzo kana kuchengeta chinhambwe. Kune zvimwe zvinhu zvekuteerera.
Munguva pfupi yapfuura, matunhu mazhinji eBay Area akapinda muyero weorenji, zvichiratidza kuti njodzi yekutapurirana kwecoronavirus "iri pakati." Izvi zvinoreva kuti vanhu vanokwanisa kudzokera kumitambo yemamuvhi, maresitorendi, uye nzvimbo dzekusimbisa muviri, kunyangwe vakawana mushonga kana kwete, kunyangwe paine mashoma nzvimbo munzvimbo idzi.
Mune mamwe mazwi, kunyangwe kana iwe wakabaiwa zvakakwana, unofanirwa kuramba uchidzidzira tsika dzehutano, "kusanganisira kupfeka chifukidziro, kuchengeta muviri wako chinhambwe (tsoka nhanhatu), kunzvenga vanhu, kudzivisa nzvimbo dzisina mweya, kukosora nekuhotsira", uye Wacha maoko ako kazhinji. "Maererano nekutungamira kweCDC.
Pfupi vhezheni: kana iri yakavhurika, saka unogona kuenda! Nekudaro, sezvo isu tisina chokwadi chekuti vakabaiwa majekiseni havazoparadzira COVID-19, isu tinofanirwa kutora matanho ekurwisa hutachiona, sekupfeka mamask uye kuregedza.
Parizvino, CDC haina kuvandudza mafambiro ayo. Dhipatimendi reCalifornia reHutano hweVoruzhinji richiri kuraira vagari kuti vasafambe anopfuura mamaira zana nemakumi matanhatu kubva kumba kunze kwekunge zviri zvezvinangwa zvekutanga.
CDPH inonyatsorambidza vashanyi kubva pakufamba kana kufamba kwekuzorora, saka unogona kumbomira kubhuka zororo iri kudzamara mirayiridzo yepamutemo yashanduka.
Dr. Chin-Hong weYunivhesiti yeCalifornia, San Francisco akataura kuti chikonzero nei CDC isina kuburitsa gwaro nyowani rekufambisa ingangoita-nekuti unogona kusangana nenhamba yakawanda yevanhu vakabayiwa majekiseni uye vasina kubaiwa pavanofamba- uye chiratidzo chakakosha.
Akati: "Munguva yezvirwere zvakasiyana siyana muUnited States, havadi kukurudzira kufamba." “Nekuti kufamba uye kufamba kwagara kuchingoenderana nekuvhiya kwakapfuura muUnited States, vanotarisira… kwete kukurudzira izvi munguva ino isina kusimba. Rudzi rwechiitiko. ”
FRP nesefa chigadzirwa katarogu
Chii chandinofanira kuita mushure mekunge ndanyatso vaccina ...
Anofara Lantern Mutambo!
Simbi Yakagadzirwa Nhumbi Mutengo Ramba Uchiwedzera.
Steel Grating, FRP nesefa, Welded Iron F ...
Kero: A1608 Chuangxin Kuvaka, 315 Changjiang Avenue, Yepamusorosoro Zone, Shijiazhuang, Hebei Province. China